ဆောင်ပါးများ | Ministry of Hotels and Tourism, Myanmar
ဖိုးညို(မင်းကင်း) မြူခိုးအုံ့ဆိုင်း မှိုင်းမှုံပျပျ လှပနေသော နာဂဒေသရှိ လေရှီးမြို့လေးသည် (၂၀၁၉)ခုနှစ် နာဂရိုးရာ ကျင်းပမည့် မြို့ငယ်လေး တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ နွေရာသီဟူသော ဥတုမရှိလောက်အောင်ပင် အေးချမ်းသာယာ ပြီး နေချင့်စဖွယ်ရှိသော နာဂလူမျိုးအများစုနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်သည်။...
ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ဖို့ ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့် ပြောင်းလဲစို့
မြင့်ထွေး (ဟိုတယ်/ခရီး) “DDG …….ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ ပြန်လာဦးမယ်ဗျာ” မှိုင်းညို့ညို့ရှမ်းတောင်တန်းကြီးနှင့် ကြည်လင်သော အင်းလေးရေပြင်အကြား ငုံ့ဆင်းနေ သော တိမ်စိုင်များကို ငေးကြည့်နေရင်း Mr.Ehlers မှ ကျွန်တော့်အား မကြည့်ဘဲ၊ ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့် ပြောလိုက်သော စကားကြောင့်...
အစိုးရသစ်၏ဒုတိယ(၁) နှစ်တာကာလအတွင်း ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အစီအစဉ်များ
ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တိုက်ရိုက်အထောက်အကူပြုခြင်း၊ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရှာဖွေပေးနိုင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်း၊ လူထုလူတန်းစားအသီးသီးထံသို့ ဝင်ငွေများ တိုက်ရိုက်၊ သွယ်ဝိုက်၊ တစ်ဆင့်ခံနည်း လမ်းများဖြင့်...
မျိုးမြင့်သန်း (မန်းစက်မြေ) ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ Green Cityဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပြီး အမှန်တကယ်လည်း စိမ်းလန်းစိုပြေသည့် နေပြည်တော်ပရဝုဏ်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ ရုံးခန်းပြတင်းပေါက်မှတဆင့် နွေရာသီ၏ သဘာဝလေပြေများကို ခံစားရင်း၊ မွေးရပ်မြေအညာဒေသ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ...
မောင်အောင်သူ (ခရီးသွား) ကျွန်တော်နှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်း။ ကျွန်တော် ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ဦးဖြစ်ရန် ကြိုးစားခဲ့ဖူးပါသည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီး နောက် ဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်း ၀င်ခွင့်ကို ၀င်ရောက်ဖြေဆိုရန်ရည်ရွယ်ပြီးရန်ကုန်မြို့၊ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းရှိ...
ဝင်းသိန်း(ဟိုတယ်/ခရီး) မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ရန်မီးရထားနှင့် ခရီးသွားခြင်းလုပ်ငန်းကို ဖန်တီးဖော်ဆောင်နိုင်ပေ သည်။...
Heedless Doesn’t See the Big Cave In Myanmar, there isaproverb “Heedless Doesn’t See the Big Cave ". It has been existing until now. Actually, it is difficult to obey this proverb. The persons who obey this proverb can success in their life. Although we have such...
မြင့်ထွေး (ဟိုတယ်/ခရီး) မောင်းနေသော မတ်တူးကားမှာ လေအေးစက်ဖွင့်ထားသော်လည်း အသက်ရှုမ၀ဖြစ်လာခြင်း၊ လမ်းအကွေ့အကောက်များ ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်နေခြင်းကြောင့် မူးလာသဖြင့် ရှေ့တွင်ထိုင်နေသော ဒုညွှန်မှူးကို တံခါးလေးဖွင့်ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံမိသည်။တစ်ဆက်တည်း မိမိဘေးရှိ...
မြင့်ထွေး (ဟိုတယ်/ခရီး) ကိစ္စများပြီး၍ စက်နှိုးထားသောကားမှာ စတင်ထွက်ခွာစဉ် အင်ဂျင်သံနှင့် ရုန်းအားကြောင့် ကားအလေးချိန်က စီးစီးပိုးပိုးရှိသလို ဖြစ်နေသည်ဟုမြင်သည်။ သဲသောင်ပြင်တွင် ဖြတ်မောင်းခြင်းကြောင့်လားဟုလည်း တွေးမိသည်။ သည်လိုအဖြစ်မျိုး၊ ကြားဖူးသော်လည်း...
မြင့်ထွေး (ဟိုတယ်/ခရီး) ငယ်စဉ်ကလမင်းကြီးအား မော့ကြည့်ပြီး လက်ဖ၀ါးနှစ်ဖက်ဖြန့်ကာ “ဖိုးလမင်းကြီးရယ် ထမင်းဆီ စမ်းရွှေလင်ပန်းလေးပေးသနားပါ”လို့ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါတောင်းဆိုခဲ့ဖူးသည်။ ဖိုးလမင်းကြီးမှ ပေးသနား လိမ့်မည်ဟုလည်း ယုံကြည်ကာမျှော်လင့်မိခဲ့သည်။ ရသည်၊ မရသည်အပထား၊...
မြင့်ထွေး (ဟိုတယ်/ခရီး) ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်ရှည်တွင် အပူဒဏ်ကိုရှောင်ရင်း မိသားစုများတွေ့ဆုံရန် အတွက် စိန်ပန်းပြာများ ဖုံးလွှမ်းရာ ကလောမြို့လေးသို့ရောက်ရှိခိုက် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ကလောမြို့၊ ဂျပန်စစ်ဆေးရုံ(အမေရိကန်သာသနာပြုကျောင်း)တွင် ဂျပန်စစ်သည်များအား...
ယနေ့ခေတ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် နည်းပညာ၏အခန်းကဏ္ဍ
Jul 11, 2018 | Articles
ယနေ့ခေတ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအခြေအနေကို လေ့လာကြည့်မည်ဆိုပါက တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာ အနေဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ခရီးသွားဧည့်သည် ၁၂၃၅ သန်း ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၂၀ ဘီလီယံရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ် ပထမ (၄)လအတွင်း ၆% ပိုမို တိုးတက်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ တကမ္ဘာလုံး...
After coming back from Kayah trip, my thoughts have been dominated by Panpet and Htaneelalehl villages. Kayan people with brass coils who can only be found in Myanmar are living in those villages. Their living standard is poor as they live in the remote places of the...
မြန်မာနိုင်ငံသည် လှပတင့်တယ်သော ခရီးစဉ်ဒေသများစွာတည်ရှိနေပြီး နိုင်ငံတကာတွင် တွေ့မြင် ရခဲ လှသော သဘာဝရသစုံလင်စွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ အနောက်မြောက် ဒေသဖြစ်သည့် သလ္လာဝတီမြို့တော်တည်ရှိရာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသည်လည်း မပျက်စီးသေးသော...
(၂၂.၄.၂၀၁၈) မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ စာမျက်နှာ င ၊ စ ၊ ဆ ၊ ဇ (၂၂.၄.၂၀၁၈) ကြေးမုံ သတင်းစာ စာမျက်နှာ င ၊ စ ၊ ဆ ၊ ဇ အစိုးရသစ်၏ဒုတိယ(၁) နှစ်တာကာလအတွင်း ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အစီအစဉ်များ ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံတော်၏...
Ei Thandar Aung, Tourism student of National Management Degree College Have you ever thought about the boosting of Myanmar tourism industry? With Myanmars changing politics, new specialization fields are increasing popularity and tourism management is among them....
Amazing arts of carving at the eastern bank of Ayeyarwaddy River
Khine Htet Htet Htun, Hsu Pyae Sone, Tourism students of National Management Degree College We have many places in Myanmar that deserve more attention of local visitors and tourists. One of spectacular places to visit is eastern bank of Ayeyarwaddy River with arts of...